किन ५ सेकेन्डमै लाग्दैन फोन? - Everest Dainik - News from Nepal
किन ५ सेकेन्डमै लाग्दैन फोन?
काठमाडौं, चैत १ । । एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा फोन गर्दा ५ सेकेन्डभित्र फोन लाग्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा चलेका दुई सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको नेटवर्कमा फोन गरेको ५ सेकेन्डमा फोन लाग्दैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई कल स्थापित हुने समय भनेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमावलीमा कल स्थापित हुने दर ५ सेकेन्ड वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणले पुस र माघ महिनामा भक्तपुरसहित पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा र बागलुङ बजारमा गरेको ड्राइभ टेस्टको क्रममा नेपालका प्रमुख दुई सेवा प्रदायक टेलिकम र एनसेलसहित स्मार्ट टेलिकमको मोबाइलको गुणस्तर मापदण्डभन्दा कम पाइएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस ‘राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७४’ को डेलीलाइफ फोटो पत्रकारिता अवार्ड विधाको लागि नेपाल टेलिकमको सहयोग